Ihe mkpuchi kọmputa - gịnị ka ọ bụ? Etu esi eme ya? Ego ole ka ọ na-eri? Etu esi ekwu ya?
Ihe mkpuchi kọmputa bụ usoro gbachapụrụ agbacha ma mara mma maka ịkwa akwa. Ihe mejupụtara ya bụ itinye akara, akara ma ọ bụ akara ejiri ya were were eriri eri na igwe na-achịkwa kọmputa nke dochiela mmegharị aka taa.
Anyị nwere ike itinye ihe ọ bụla na ihe ọ bụla. A na-eji ihe eji achọ ihe eji egwuputa ihe eji etinye ihe eji egwuputa ihe n’ile anya na udiri uwe ndi ozo, na-eke uwe ndi ozo. Uwe ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ na-eyi na-ewuli njirimara ya, akara na echiche nke obodo. Ndị ọrụ niile, dịka ndị egwuregwu bọọlụ n’otu otu, na-egwu otu egwuregwu.
Gaa leta ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị >>
Enwekwara ike iji ihe mkpuchi kọmputa na-arụ ọrụ nke ọma iji mepụta ngwa na uwe mgbasa ozi. Akara ngosi aha na ụlọ ọrụ on T-shirts na sweatshirts nwere ike ịbụ ezigbo onyinye maka ndị ahịa. Site na iyi akwa nkwado anyị, ha ga-akwalite ụdị ika anyị.
Agbanyeghị, eji naanị ihe eji achọ mma kọmputa abụghị naanị akwa. I nwekwara ike itinye ihe na kọmputa site na okpu, akpa, nhicha ahụ, uwe mmiri na uwe ime.
Akara ejiri mara na ihe a na-ahụ anya na-adịgide adịgide karịa ngwa ngwa mbughari na akwa ndị nwere akwa, na-adụnyere uwe dị ka ihe ndozi mgbe niile.
Ihe mkpuchi kọmputa - akụkọ banyere ibipụta ya na uwe mgbasa ozi
Womenmụ nwanyị na - eji ihe eji eme uwe na tebụl aka ochie.
akpa akwa ha na - abụkarị ihe gbasara ọdịbendị na akara nke mpaghara na mba nyere. O zuru ezu icheta ihe eji achọ mma nke Kashubian ma ọ bụ akwa ugwu, nke bụ ihe ndị a na-enweghị ike ịkepụ iche na ejiji ndị mmadụ.
Ipụ iche n'etiti igwe mmadụ n'ụzọ dị otu a, yana ịkọwa ndị otu dị iche iche, jiri ngwa ahịa na ndị ọkachamara PR mee ihe ngwa ngwa. Onye ọrụ ahụ yi uwe dị mma ahọpụtara na-emeso onye ahịa ya iche. Dịka ọmụmaatụ, dịka a na-akwanyere ndị isi ụgbọ mmiri, ndị uwe ojii na ndị agha uwe ndị mara mma, ndị na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ahụta dị iche na uwe na ejiji dị iche iche. Ka a sịkwa ihe mere ọtụtụ ụlọ ọrụ ji kpebie itinye ego na uwe ndị pụrụ iche. Site na nke a, ndị ọrụ ha nwere ike ịdị otu otu, na-egwuri egwu ọnụ maka otu nzube.
Mgbakwunye pụtakwara Ngwa na uwe mgbasa ozi. Onyinye niile, onyinye na onyinye ndi mmadu na-acho. Ọ bụrụ na o nweta akpa, okpu ma ọ bụ uwe elu nwere akara nke ụlọ ọrụ, ọ ga - eyi ya nke ọma, si otú a na - akpọsa ụdị ahụ.
Mmepe akụ na ụba na ijikọ ụwa ọnụ mere ka ihe eji achọ akwa ihe na-eto kwa afọ. Ma ọ dabara nke ọma, ọganihu nke usoro kọmputa esorola mee ka e nwee ohere dị ukwuu. Ka ọ dị ugbu a, itinye ihe odide na ụdị dị iche iche na uwe na ngwa dị ugbu a ngwa ngwa, nkenke, zuru oke, ikwugharị na ọnụ ala. Taa, enwere ike ịrụ ọtụtụ puku ihe mkpuchi n'enweghị nsogbu ọ bụla na obere oge iji zute ọbụna atụmanya kachasị ukwuu.
Kedụ ka emee nsị kọmputa?
Ihe nkedo nke komputa - teknụzụ nke ihe ndekota n’uwe
Igwe eji ọgbara ọhụrụ nwere ọtụtụ agịga na eriri nke agba dị iche iche. Site na programmụ kọmputa na-edozi usoro ịkwa akwa ahụ. Site na usoro ebugoro ahụ, igwe na-adọta mkpụrụedemede na ụdị kwesịrị ekwesị.
Etu esi eji ejiji, ududo
O zuru ezu ikpebi n ’ọnọdụ ma ọ bụ ebe ihe ịchọrọ ka mkpuchi ahụ ka ọ bụrụ. Na mgbakwunye, ịkwesịrị ịhọrọ nhazi ya na nha ya. Ọtụtụ mgbe, a na-ebipụta ihe ederede na ụdị akara kwesịrị ekwesị na akara nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ. Ekwesịrị izipu ụkpụrụ ahụ na usoro ahụ, ndị ọkachamara anyị ga - enyere aka imeghari ya na mkpa nke igwe na-anya igwe na-elekọta kọmputa.
Uru nke nsị kọmputa
Ọdịdị bụ ihe na-eme ka uwe nke nwere ihe ngosi mara mma pụtapụta. Ejiri nlezianya kee ihe mkpuchi na-enye ihe ọhụụ. Ọ na-ahụ aka, nanị nkecha. Ihe mkpuchi kọmputa na-enye uwe na akụrụngwa ụdị na ọkaibe, njirimara a na-akpọsa ya na-enwe ugwu. Cheedị echiche ụdị T-shirts abụọ, otu nwere njiri mara ụlọ ọrụ nke ọma ma nke ọzọ nwere mkpọsa nke mgbasa ozi rapaara na ya. Ihe oyiyi dị otú a na-echetara juxtaposition nke Mercedes mara mma, mara mma na-esote ụbọchị plastic na ọnụ ala.
Ya mere, ịdịgide nke akpa mkpị kọmputa dị mma karịa nke ndị asọmpi ya. Ihe ndozi di iche-iche nwere otu odi aso dika uwe ndi o choro. Ọ baghị uru iche na ihe nnọchianya ahụ ma ọ bụ ihe edetu ahụ ga-adapụsị na nhicha ma ọ bụ ntinye. Ihe mkpuchi kọmputa bụ akụkụ dị mkpa nke uwe, ọ bụghịkwa naanị ngwa ngwa mbughari, ngwa anaghị adị nke ọdịdị ya na-emebi ngwa ngwa.
Ihe mkpuchi kọmputa nwere ike ịbụ nke ọ bụla nwere agba. Nanị mmachi bụ agba nke eri ejiri. A na-eme ozi afọ ojuju na usoro eji arụ ọrụ arụmọrụ na njikwa kọmputa.
Enwere ike ịhazi onwe gị ozi ọma na ngwa ngwa. Teknụzụ kọmpụta na-enye ohere ịkacha, ga-ekwugharị na nnukwu mkpebi nke ụkpụrụ, akara na ihe ndebiri.
Site n'ọtụtụ dị elu, nsị akwa na-akwụ ụgwọ akụ na ụba. Ọnụahịa ya dị ala, na-eme ka ọ dị mma maka ịchọ ụdị uwe dị iche iche - shirts, t-shirts, polos, uwe ogologo ọkpa, obere mkpụmkpụ - yana akwa, akwa na akpa.
Ọdịmma ọghọm nke itinye ihe na kọmputa
N'adịghị ka mbipụta kọmputa zuru oke, akwụkwọ mgbasa ozi zuru oke, ọ gaghị ekwe omume itinye paịlị foto na-enweghị atụ. Agbanyeghị, nke a abụghị ihe ọ bụ. Roidkpa uwe bụ ihe a na-ekwu maka ọdịnala, njiri mara oke, ebe ọ bụ na e jikọtara ya na uwe agha na-achọ uwe akwa ọha mmadụ. Ọ nweghị ihe jikọrọ ya na eserese kitschy, ụcha na ọesụ.
Ihe mkpuchi kọmputa - ngwaahịa ndị a ma ama na uwe mgbasa ozi
Polo uwe elu nwere usoro eji eme ihe
Mmekọ nke mbụ na akpa nnabata? Uwe nwere akwa olu na akara ejiri mara mma n’esi. Nchikota nke idi nma na iyi nkasi obi. Mee ka ndị mmadụ nwee obi ụtọ iyi uwe elu dị otú ahụ na njiri mara ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị.
T-shirts nwere njiri mara ụlọ ọrụ na ihe ndebiri
Jikere ejikere kwa ubochi. Mee ka ndị ọrụ gị ma ọ bụ ndị ahịa kụọ ahịa gị nke na-eyi uwe mwụda mara mma na njirimara gị ma ọ bụ ihe ederede na-agba ha ume iji ọrụ ụlọ ọrụ gị.
Uwe elu-elu na ihe eji etinye ma obu ihe eji ede komputa bu ngwoolu zuru oke nke na-enye gi ohere igosipu na igwe mmadu nke igwe mgbasa ozi nke China nwere mbiputara di ala na nke na-adịgide adịgide.
Sweatshirts nwere usoro eji eme ihe
Egwuregwu hoodie kpochapụwo nwekwara ike kpọsaa ngwa ahịa ma ọ bụ akara. Kpoo ederede gị, aha na / ma ọ bụ akara na sweatshirt.
Ihe mkpuchi kọmputa na anụrị
Wantchọrọ ka ndị ọrụ gị dị ọkụ ma n'otu oge ahụ jiri uwe ha kọwaa ụlọ ọrụ ahụ? Ma ọ bụ ikekwe ịchọrọ ịmepụta akwa nkwado kachasị mma maka ụlọ ọrụ gị? Mpempe akwụkwọ eji etinye kọmputa na kọmputa bụ ezigbo nhọrọ.
Uwe eji akwa komputa
Ọfụma karịa? Mee ka ndị ọrụ gị jeere ndị ahịa ozi uwe mara mma nwere njiri mara ụlọ ọrụ. Họrọ uwe mkpuchi kọmputa na uwe elu.
Ibubata akpa na mkpirisi nwere mbipụta
Ọ bụghị naanị akwa dị elu zuru oke maka itinye ihe ederede ma ọ bụ ụkpụrụ. Tinye mkpuchi na uwe ogologo ọkpa ma ọ bụ mkpụmkpụ iji mepụta uwe nkwado pụrụ iche.
Ihe mkpuchi kọmputa na okpu
O siri ike iche n'echiche baseball n'enweghị akara ngosi nke ndị otu ọkacha mmasị gị, mahadum gụsịrị akwụkwọ ma ọ bụ aha ika. Mee ka njiri mara ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị gosipụta ya na nlele. Kechie ha na okpu.
Anụ ụlọ a na-asa ahụ na uwe mmiri a pịrị apị na ya
Onweghị ihe ga-amata ọdịiche dị n’otu ụlọ oriri na nkwari akụ na SPA dịka akwa nhicha na ụlọ ịsa ahụ mara mma. Gbanwee akwa a na-enweghị aha, na-agwụ ike gaa na ihe pụrụ iche nke na-emesi ike okomoko nke ika gị. Ọ bụ ugwu maka gị, mana ọ dịkwa ụtọ maka ndị ọbịa gị.
Akpa nwere akpa ihe na kọmputa
Kedu otu esi adị mfe akara akpa na aha ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ? Ihe mkpuchi kọmputa na-arụ ọrụ dị ukwuu. N’enweghi onu na ngwa ngwa, akpa nkịtị nwere ike ibuo ihe di nkpa banyere ulo oru gi.
Uwe ịdọ aka na ntị na mkpuchi kọmputa
Uwe a na-arụ ọrụ na-arụkwa ọrụ dị ukwuu dị ka ụgbọelu maka akpa na kọmputa. Aha, ọrụ, aha ụlọ ọrụ na njirimara - embroider na coverall ma ọ bụ ihe ndị ọzọ pụrụ iche nke ọrụ na akwa akwa.
Ihe mkpuchi kọmputa - ole ka ọ na-eri?
Ihe mkpuchi kọmputa bụ ọnụ ala. Agbanyeghị, ọ bụ ihe siri ike ịkọwapụta ọnụahịa nke otu itinye mgbakwunye, n'ihi na ọtụtụ paradaịs na-emetụta ọnụahịa a.
Ihe mkpuchi kọmputa ga-adị ọnụ ala karịa otu maka nnukwu iwu. Ọnụahịa ahụ na-emetụtakwa nha mpaghara a ga-etinye, ụdị ihe mkpuchi onwe ya, njupụta nke ụkpụrụ dị n'elu, ọnụọgụ nke agịga kwa cm.2 ihe, ya na ọnụ ọgụgụ ebe ekwesịrị itinye ihe mkpuchi na ihe ahụ.
Achọpụtaghị ọnụahịa ahụ ọnụ ọgụgụ nke agba ejiri, n'ihi na igwe igweoduakwa nwere ọtụtụ eri.
Anyị na-akpọ gị òkù ka ịhapụrụ gị n'ihe ọ rụzuru. Biko zitere anyị ndịna-emeputa ihe ịchọrọ ịchọrọ itinye na ozi gbasara ọnụọgụ ole ị ga-eme.
kedu ihe eji eme kọmputakedu ihe eji eme kọmputaebe ị ga-eme ka eji achọ ihe n’ kọmputaihe mkpuchi kọmputaKọmputa computerized Białystokihe eji eme kọmputacomputerized embroidery bydgoszczọnụ ahịa nsị kọmputandepụta ọnụahịa akpaaka kọmputaihe mkpuchi kọmputa bụ ihe ọ bụihe mkpuchi kọmputa bụ ihe ọ bụIhe eji awu komputa na Częstochowacomputerized embroidery gdańskGdynia na-arụ ọrụ kọmputakọmputa gliwice na-arụ ọrụ kọmputaKọmputa compacteri Gnieznoihe mkpuchi kọmputa pụtara ego ole ọ na-efukompeniviiti agbakwunyere dị kaihe mkpuchi kọmputa ka esi ebidoihe eji eme kọmputaihe igwe na kọmputaihe ndeputa komputa gini pkdKọmpụta Kalisz mejupụtara kọmputakọmputa komowice computerizedcompresserized embroidery na kielceKonin komputa na kọmputaihe mkpuchi kọmputa na KoszalinKọmputa kompeni Krakowihe eji eme ihendepụta ọnụahịa ụgbọ mmiri kọmputaLublin na-arụ ọrụ kọmputaihe mkpuchi kọmputa na T-shirtskomputa ịba na komputaNowy Sącz gbara okirikirikompenize na-arụ ọrụ komputa olsztynihe mkpuchi kọmputa na Opolepabianice na-arụ ọrụ kọmputapoznań na kọmputa iheeriri igwe kọmputaihe mkpuchi kọmputa na Rybnikcomputerized embroidery nke reichsIhe eji eme ihe na kọmputa Kompeni SilesiaSłupsk jiri kọmputa eme iheKọmpụta klọọkụ kọmputa na Sosnowieckọmputa swarzędz na-arụ ọrụ kọmputaIhe eji ede brọshọki komputaMbipụta akpa na kọmputaIhe mkpuchi kọmputa na TarnówKomputa eji eme ihe na ToruńKọmputa compagerized na kọmputandepụta ọnụahịa kọmputa na kọmputakọmputa na-adọrọ adọrọ kọmputausoro eji achọ iheugwu ivu kọmputaEgo ole ka ịbanye na kọmputa na-eriotu esi eme ihe eji eme kọmputaetu esi akwụ ọnụ ahịa kọmputakedu ihe eji eme kọmputa-esi mee ka nsị kọmputaka esi adọwa ihe mkpuchi kọmputaka esi chepụta uwe ime kọmputa-esi mee ka nsị kọmputaUweMbipụtauwe mgbasa ozikwa Akwa